Dual - iyona umlingani ephelele ubani sigcwalisa nawe nasengqondweni. Indlela yokuthola umphefumulo wakho womshado
Abantu bebelokhu axakwe ucinge nengxenye yayo yesibili, kodwa naphezu choice sobala (esinayo emhlabeni ngoba abantu abangaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane eziyisikhombisa), hhayi wonke umuntu angakwazi ukuthola umlingani wabo enhle nabo ungakwazi side by side zidlule kuzo zonke izilingo zokuphila futhi sikhule kuzo, abe ubuntu obunobunye futhi bejabule. Befuna injabulo siya ababikezeli benhlanhla izangoma kanye nodokotela, engaboni ukuthi ngamunye wethu kusukela ekuzalweni umuntu wakubo. Lokho bheka nje ngaye nzima ngezinye izikhathi kancane. Ungase ubuze, kuyini na? Esizoyiphendula wena - ezimbili. Lokhu sotsionike eside ekhethekile elisetshenziselwa ukuchaza umuntu enye ingxenye yakho. Futhi abantu abanjalo bangase babe mbalwa, ngoba webumbacambili kubangelwa ubuntu psycho. Ngakho, laba bantu okungenani eziningana million yonke le mbulunga. Interested? Sizobe ikutshele ukuthi uthole umuntu athole injabulo emshadweni.
Leli gama ngeke ngokuvamile atholakala amabhuku ku kwengqondo ngisho lingandile ezincwadini lesibonwa ukudayisa mass. Duality iyisisekelo socionics, ukubaluleka okukhulu emphakathini zesayensi namanje Ziphikisana. Ngokuvamile lokhu kubhekwa ingxenye isayensi yokusebenza kwengqondo, kodwa eminyakeni yamuva ukukhuluma ngesidingo ukugqamisa ensimini ahlukene yolwazi edinga ukuhlolisisa.
Uma uthembele nemiqondo eyisisekelo socionics, le dual - uzakwethu evumelana nawe ngazo zonke izindlela futhi sigcwalisa nawe. Umsunguli kwabantu wagomela ukuthi umuntu akudingeki uthando esikhashana okubangela nemizwelo eminingi ebuhlungu futhi ezithile ukusabela namazwi imizwa, enembile wanelise izidingo uzakwethu. It is kuleli cala, ubudlelwane akhiwa kalula, futhi ukuba nesikhathi esimnandi zingahlala ukuphila konke. Uma lokhu kwenzeka, ungakwazi sesiqiniseka - umlingani wakho kuyinto ezimbili. Kungokuphawulekayo ukuthi kuwo wonke umuntu emhlabeni ubani ukuthi lezi zithandani ephelele.
A amazwi ambalwa mayelana sotsionike
abalingani Ihambisana kuchazwe isethi eziyinkimbinkimbi yezici. Phakathi kwabo kukhona:
Lokho isici zokugcina Socionics ibheka ezibaluleke kakhulu futhi ebalulekile, ngoba uthishanhloko ekunqumeni Douala. Yilesi isisekelo kwesayensi ezidalwe ngeminyaka yoma kwekhulu elidlule Aushra Augustinavichiute. Nakuba ekuthuthukiseni umbono wakhe, umlobi wathatha njengesisekelo umsebenzi Jung ku typology. Ngenxa yalokho, isiyalo yesayensi wazalwa, hlukanisa zonke ubuntu eyishumi nesithupha sociotypes ukwakha ngazimbili obunobunye eziyisishiyagalombili.
Kungakhathaliseki ukuthi abantu abaningi bafuna ehlukile, kodwa injabulo kuphela azuzwe ebuhlotsheni ezimbili. Ngakho-ke, uma ungeyena inketho ekahle uhlobo ubuntu kumlingani wakho, musa ngisho alindele ukuthi uyobe ukuthuthukisa ubuhlobo besikhathi eside kungaba sikhule lapho, ukuthuthukisa futhi afundise izingane.
Okwamanje, socionics ibonwa njengoba esenezelwe ukuze ngokwesayensi yokuhlalisana kwabantu futhi pskhologii kodwa ukusebenzisa ulwazi inikezwe yilo isayensi ingaba sphere ngokuphelele ezihlukahlukene zokuphila. Ngokwesibonelo, abaphathi eziningi izinkampani ezinkulu wacosha abasebenzi babo ngesisekelo the typology yasungulwa Augustinavichiute. Lokhu kukuvumela ukuba emsebenzini wonke amalungu abasebenzi ukuze kugwenywe izingxabano ezingadingekile ku trifles. Kodwa njengoba sikhuluma ngolunye unesithakazelo umbuzo kanjani ukuthola umphefumulo wakho womshado, bese sicabangela webumbacambili mayelana nobuhlobo owesilisa nowesifazane.
izinhlobo ubuntu: umbono jikelele
Njengoba sishilo, umlingani ekahle kungenzeka kuphela ezimbili. Kodwa sotsiotip ukunquma amakhono azo nokuthi yini neengcezu yabo kunzima ngaphandle kolwazi ekhethekile. Ukuze wenze lokhu, kumele ube okungenani ukuqonda olukha phezulu yiziphi izinhlobo ubuntu kanye indlela akhiwa.
Carl Jung wathola ukuthi, uma sikhuluma typology, kuba okokuqala kudingekile ukuba acabangele ezinye izici umuntu ukwakha kuwo. Ngesisekelo ifomu izinhlobo kabi ngokwengqondo:
Kuyadingeka ukuba acabangele umbono izwe, okungukuthi, introversion noma extraversion. Okokuqala zonke isipiliyoni ngokwako futhi akuvamile ukukhombisa imizwa kweqiniso imizwelo abantu. Kodwa yokugcina ngokomzwelo kakhulu ngabo baze bathi "umphefumulo gengelezi."
Yiqiniso, lena akuyona incazelo ephelele ukusebenza 'uYoung, kodwa umuntu akahleli bahlanganyele sina kwengqondo, lolu lwazi kwanele. Ausra Augustinavichiute waqhubeka Jung futhi wasikisela ukuba ubuntu typology ukunika umuntu ithuba lokuzizwela ukuphila nayo yonke imicimbi okwenzeka ohlangothini olulodwa kuphela. Lokhu kubangela eziningi nobunzima nezinkinga, ngakho ukwakha indoda enomkhaya izidingo nokuchibiyela, okuyinto nayo idinga ukuthi kukhona umngane wakhe womshado. Ngenxa yalokho, kukhona into okuthiwa "umlingani ekahle" elikuvumela ukuba ukhulume ngokombono ubuhlobo bomkhaya. Ngaphezu kwalokho, ochwepheshe abaningi bathi webumbacambili - lena isimo esiyinhloko emshadweni ophumelelayo. Yiqiniso, akuyona kuphela, kodwa ukuhambisana abalingani sizimisele amaphesenti impendulo ayisishiyagalombili.
Ukubambisana ngokuya kwenza
Njengoba sithi ezimbili - nguye empeleni kuyinto umlingani wethu, kukhona inkolelo yokuthi umuntu ngamunye emhlabeni ukuthola umuntu uzongithanda, aqonde futhi amukele kuye ngoba ungubani ngempela. Futhi lokhu kuyiqiniso.
Ngo yebhangqa duals kube nomuntu ocindezela, ingxabano kanye mpi ngobuholi. umlingani ngamunye aziqonde ngokucacile ukuthi sinamandla, nokuthi bakwazi kangcono ukwenza intandokazi. Ngakho-ke, umholi we igunya njengoba kungenzeka idluliselwe phambili komunye nomunye. Lokhu kuvumelana nezimo aqede ukuxabana, izingxabano. Yiqiniso, ngendlela ezimbili ubuhlobo ukuxabana namanje, kodwa okusheshe akuvamile siphenduke into sina.
Ngokuthakazelisayo, ngazimbili ezimbili yazo ukuze usinde ekuqaleni ubuhlobo. Phakathi nale nkathi, ukuncipha abalingani kungase kudingeke nokungaqondi ezinye okubangelwa umehluko esiwenzayo kwezemfundo, izithakazelo kanye ukufaka esibalulekile. Phela uma ukhuluma ngani ubuhlobo ezimbili thina, awusebenzi ngakususi ukuthi pair ngamunye has Izinjongo yayo, imigomo, amakhono kanye nezifiso. Bavame akuzona ezifanayo, kodwa ehlukene. Lokhu kusiza ukuqinisa nomunye, kodwa isimo empilweni kanye ukubaluleka isikali duals ezifanayo, kwakheka isisekelo kwedivayisi ephelele. Zama ukunikeza isimo sengqondo esinjalo isici ngaphezulu.
Izimpawu Dual Ubudlelwano
Okunjalo ubuntu babantu ukuthi singabantwana siyidinga impela webumbacambili. Ngamunye wethu kudingeka umuntu obani esingaqala nabo Ungazenzi futhi libe yilo ngempela. Ngakho kungenzeka ukuba wenze ubuhlobo ezimbili - ugqozi, kusenze ezolile ngaphezulu nokugxilisa umuzwa wokulondeka.
Dual uyapha futhi ithola umuzwa induduzo, umusi ngokwemvelo ukuxoxa ngemizwa, imizwa namazwi. Konke lokhu zikhishwa ngendlela ibonwa nguzakwethu futhi kuyadingeka. Indoda iba bajabule, eqiniseka kakhudlwana futhi uqala ukuthuthukisa ngentshiseko yomphakathi, ukwakha imisebenzi yokuziphilisa emihle, noma waqaphela ngokuya lokusungula. Zinyamalale ukwesaba, izakhiwo kanye zokwesaba, kodwa ngenxa yokuntula kwabo ngaphakathi lo mbhangqwana sekuba induduzo ngokomqondo, nokwagcina kuyadingeka ukuze, lapho sikhuluma Psychology ubudlelwane phakathi kwendoda nomkayo.
Umhlangano no-dualom: njengoba kwenzeka
Kusukela izigaba odlule kuba sobala ukuthi bonke abakhathalela ngayo umbuzo kanjani ukuthola umphefumulo wakho womshado, ngicabange ngalokho lokuhlangana bephethe Douala. Kunzima kangakanani ukubona esixukwini kwabanye abantu, noma phakathi kwabangani bakho? Yini okungase kuthintwe ngesikhathi enomhlangano ekahle yakhe? Uzowathola umangale, kodwa ... lutho. Cishe akukho muntu okwaziyo shazi ukuqonda ukuthi phambi kwakhe kuyinto umphefumulo wakhe womshado, ngoba zokuxhumana Kulula kakhulu futhi ekhululekile. Kubonakala sengathi umuntu olandelayo, silula, futhi kungekho imfihlakalo, ngakho asikho isidingo sizame ukuba ngcono futhi ukufuna umlingani.
Kuyinto lokhu okubonakala kukwenza kungenzeki ukuba bagcine ekahle lwayo iqhubekele naye kwenye ezingeni of ubudlelwano. Esikhathini esiningi abantu bajwayele ngakho yokubakhona eziningi lowo muntu, lokho akusho ngisho ukuqonda umsuka nomuzwa wenjabulo induduzo, bakubheka njengobuthakathaka zemvelo. ukulahlekelwa kuphela, babazi kahle kangakanani badinga umlingani ofanayo, ngaphandle okuyinto ukuphila ilahlekelwa incazelo yalo nokulisebenzisa upende.
Nquma uhlobo ubuntu bakho futhi Douala, obani ungakwazi akha pair eqinile obunobunye ngeke socionic test.
Okwamanje, siye ithuthukiswe izinhlobo eziningana test socionic ngenombolo ezahlukene imibuzo. Bona kungatholakala kuyi-Internet, futhi zonke ukuhlinzeka ngolwazi olwanele okunokwethenjelwa ukubone ngokuthe ngqo izinhlobo ubuntu.
Uhlolo zisekelwe uhlu lwemibuzo noma nezitatimende, okuhlanganisa isidingo ukukhetha afaneleka kakhulu ekuhlolweni. Esimisweni esikhethekile ihlaziya izimpendulo zakho futhi ngesisekelo salokhu kunikeza umphumela. Iqukethe incazelo ngabanye kanye Isi-Duala, okuyinto kwakhiwa union ephelele. Thina kafushane chaza konke eyishumi nesithupha izinhlobo socionic namabhangqa ezakhiwe ngazo.
Don Quixote futhi Dumas
Yalesi pair, ungakwazi ukutshela ukuthi lena inketho lapho bahlukene ukuheha. Extrovert Don Quixote njalo edonsa imibono unesibopho isimo sezulu ngokomzwelo emkhayeni. Kodwa izibambe umnyewu Dumas ulungile ukudala kwakubenza bazizwe benethezekile futhi induduzo. Bobabili abalingani uthande ukuba ukuzijabulisa bese ugcine kusihlwa ukuba nezingxoxo ezijulile, abelana izindinganiso ezazivamile futhi uzibekela imigomo ekuphileni.
Robespierre futhi Hugo
Robespierre kuyinto logician, wayehlale ubeka wonke ukuhlaziywa kanye nokugxeka. Uyacabanga eziningi futhi uyakwazi ukuthola indlela kunoma isiphi isimo esinzima. Kodwa Hugo kungenziwa ngokuthi umuntu-iholide. He qamba le ukunethezeka kwezinto ezibonakalayo nokuma ngokomzwelo, ukusuthisa umlingani wakho amandla engangisidinga kakhulu. Hugo futhi ulungile ukudala induduzo ekhaya futhi ahlinzeke Isi-Duala isidlo esimnandi ukuthi Robespierre uyakwazisa. Bobabili bathanda ukukhuluma amathuba esikhathini esizayo kanye nesayensi.
Hamlet kanye Maxim Gorky
Hamlet - ekhanyayo, ngokomzwelo futhi kancane ubuntu budedengu, kudingeka kokuqondisa nesiqondiso. Lokho sinjalo Maxim Gorky, ukulungele ukugxeka, ukuphakamisa futhi njalo ukufunda. Ngo pair ezinjalo abalingani ukuza yokuthi Hamlet kuba ukuzola futhi njengomuntu ohluzekile, futhi Maxim Gorky - a evulekile "zingaphila".
Amabhungane futhi Yesenin
Nalapha futhi, it edonsela abalingani okuphambene. Zhukov kuyinto ubuntu namandla, ukwazi ukubhekana nanoma yiziphi izinkinga. Kulokhu, it is cishe wadala ukuze kuvikelwe ababuthaka futhi sibasekele. It owuthanda futhi captivates esenina ababuthakathaka, okuyinto neze angaba khona ngedwa. Kodwa-ke nguye has a umuzwa athuthukile kakhulu futhi kuyasiza ukubikezela isimo Zhukov, futhi usenza ukuba impumelelo ezintsha.
Balzac kungenziwa ngokuthi i abagxeki sefilosofi, yena ohlwitha okushiwo izenzakalo owuthanda okungazelelwe, engenangqondo futhi akuqinisekile kaKhesari. Uthatha ngokuphelele ukunakekelwa wenduduzo owenza wonke umsebenzi wasekhaya, futhi Balzac kwenza imali futhi ikwenze oncomekayo. Caesar libhekisela izici sexy kakhulu ebusweni, okuthi omuhle kuthinta Isi-Duala, ukushaja imizwa yakhe emihle futhi umbono oqondile ekuphileni.
Dzhek eLondon Dreiser
Uma ubona laba bantu, nawe ngeke ucabange ukuthi they cha fanele lokho enivumelana ngako. Kodwa eqinisweni, umphelelisi nomunye ngokuphelele. Sinenkosi amaningi amanani ezivamile futhi umbono wokuphila:
ikhono ukusebenza ukufeza umgomo, kungakhathaliseki izithiyo;
isifiso sokufuna ukunethezeka kwezinto ezibonakalayo nokunye okunjalo.
Laba bantu ukuba asebenze ngempumelelo ndawonye, njengoba ahloselwe okwenza imali. London kanye Dreiser, ungakwazi ukuvula ibhizinisi lomndeni, ngamunye wabo uyoba nomthwalo nobukhulu bayo, kanjalo bayakukushisela wena Runaway impumelelo esikhathini esifishane.
Stirlitz futhi Dostoevsky
Bobabili abalingani kukhona okunengqondo, okungukuthi iphuzu lwabo oluqinile. Stirlitz iba "umzali" abese eqala umthwalo egcwele ye umndeni. Usebenza kanzima, kuletha yonke imali umndeni futhi inikeza induduzo ekhaya. Dostoevsky luyabekezela futhi bezimisele ukukhuthazelela zonke izimo, kodwa uyazi ukuthi avuselele e Douala uthando wokuphila nokubonisa ukuthi ngaphezu ukusebenza emhlabeni ziningi izinto ezithakazelisayo futhi kujabulise.
Huxley futhi Gabin
Huxley - iyona ingxenye ngokomzwelo kwabantu ababili. He is abanamakhono futhi ukulungele ukuba siqonde ubukhulu, futhi udale kudingekile isimo Gabenu ngokomzwelo impumelelo engakaze ibonwe. Lokho kubanika, uyakwazi ukuxazulula noma yiziphi izinkinga isicelo, ukuthanda umsebenzi ngokomzimba futhi ungathola isixazululo elilungile iyiphi inkinga. Huxley idinga ubuholi ezithambile kanye yomuntu eyokwenziwa ibe ukubekezelela isimo sakhe senhliziyo. A Gabenu kudingeka ezimbili ukwazi vumela nakangaka yayo futhi ukubikezela impumelelo yabo. Lona soft kakhulu futhi sengozini umbhangqwana lapho dualization we abushelelezi konke.
Psychology of ubudlelwano phakathi kwendoda nomkayo - kuyindaba eyinkimbinkimbi kakhulu, okuyinto lengubo izingxenye eziningi. Dualization kuyinto ingxenye yayo ebalulekile, kodwa akuyena yedwa. Izazi zokusebenza kwengqondo zithi akuzona zonke ezimbili kungaba umlingani wakho ekahle, ngoba kwalokho engavumelekile itholakala kuphela uma bobabili ophathina kukhona yobudala efanayo, izimo imfundo ukuphila imigomo. Kulokhu, uzothola enye ingxenye yakho, eduze okuyinto uyohlale zifudumele futhi zithokomele.
Kuyini amanga: uhambo ngokusebenzisa isikhathi
Kuyini ukuziphindiselela? Njengoba lo muzwa kuthinta ukuphila kwethu
Okthoba amabika. Folk amabika ekwindla
Ama-headphone Philips SHC1300 - Ukubuyekeza kanye impendulo
Abaseshi Russian - uhlobo olusha izincwadi owayephila
Emakethe yezabasebenzi nenkokhelo